ရိုဟင်ဂျာနှင့်ခိုးသားလေးဆယ် ဂဇက်ရွာကြီးအား သိမ်းရန် တာဆူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရိုဟင်ဂျာနှင့်ခိုးသားလေးဆယ် ဂဇက်ရွာကြီးအား သိမ်းရန် တာဆူ
ရိုဟင်ဂျာနှင့်ခိုးသားလေးဆယ် ဂဇက်ရွာကြီးအား သိမ်းရန် တာဆူ
Posted by သခင်သူရိန် on May 2, 2012 in Community & Society, Ethnic Groups, History, Opinions & Discussion, Politics, Issues, Relationships & Family | 24 comments
BBC သတင်းဌာနကြီး၏ အထူးထုတ် မြန်မာပြည်မြေပုံကြီးအား ကြည့်ရူ့ကာ အလွန်အမင်း စိတ်ပျက် ဒေါသထွက်နေရသော မြန်မာပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့အား သူကြီးမှ ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဆိုသည့် လူမျိုးစုများ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လွန်လေပြီးသော အခါက နေထိုင် ခဲ့ကြသည်ကို ကြားဖူးသည် (ဝါ) မကြားဖူးပါ ဆိုသည့် စစ်တမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်အရေးဆိုရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း သတင်းအတော်များများနှင့် ထိုသတင်းအတွက် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ကိုယ်စား လှုပ်ရှားအရေးဆိုနေကြသူများအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်နေမိပါသည်။ ကျွန်တော်ဖတ်မိသော၊ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ဦးမှ ပေးပို့ထားသော သတင်းတစ်ပုဒ်အား ဖောက်သည်ချ၊ ဖတ်ရူ့ကာ မှားသည်၊ မှန်သည် ဝေခွဲကြပါကုန်။
အောက်ပါလင်ဒ့်အား ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ရှိ့သူများ ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုပို့စ်တင်သူမှာ ကျွန်တော်သခင်သူရိန်မဟုတ်ဘဲ ထိုစာများမှာ ဂဇက်မှ မိတ်ဆွေအပေါင်း ရောင်းရင်းအပေါင်းအား ကျော်ဖတ်မိမည်၊ မသိလိုက်မည်စိုးသဖြင့် မောင်းကြေးနင်းခတ်လိုက်ရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်မှ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော ရခိုင်မျိုးနွယ်စု (ဝါ) လူမျိုးစုအား မကြားဖူးပါ။ ဤအရပ်ဒေသဘက်တွင် ဘင်္ဂလားကုလားများ မြန်မာပြည်သို့ သူတို့နိုင်ငံတွင် ငတ်ပြတ်ပြီး လှေဖြင့် ခိုးကူးဝင်ရောက်လေ့ရှိ့ကြောင်းတော့ ကြားဖူးပါသည်။ သူကြီးမှ ပွိုင့်မပေးလည်း အမျိုးသားရေးအတွက် ရှယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရေးကြီးလျှင် သွေးနီးဖို့တော့လိုပါသည်။
ထိုပို့စ်သည် ကိုမောင်ကိုသက်၏ facebook page မှ ဖတ်ရူ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤပို့စ်အား ပြန်လည် ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုမောင်ကိုသက်အား ရွာသားများကိုယ်စား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။
ဂေဇက်ရွာ ကို မသိမ်းခင် အရင်ဆုံးတော့ ရွာမှာ မန်ဘာ ဝင်ကြရလိမ့်မယ်။
အနဲဆုံး Points: ၁၀၀၀၀ နဲ့ Rank: Bronze ဖြစ်မှ သိမ်းနိုင်ဖို့ နီးစပ်မယ်။
ဒီတော့ သူတို့ ရွာထဲ မှာ 24/7 အချိန်ပေး ဖို့လိုတယ်။
ဒီကြားထဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ကကြောင်ကြီး တို့၊ ထင်ရာဗျင်း မဲ့ ကဘုန်းကျော် တို့၊ လူဆို ဗိုလ်မထား ဦးရီးပု တို့၊ လူစိမ်း ဆို မလွတ်တမ်း စကန် လုပ်တဲ့ တပ်မကြီး၇၇ တို့ ရဲ့ လက်နက်ကြီး တွေကိုလဲ မထိအောင် ရှောင်နိုင်ရမယ်။
ဆိုတော့ကာ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ (ဘယ်သူ လဲ သိတယ် မဟုတ်လား)
အဘဖော နဲ့ တွေ့သွားမယ်။ ;-)
Post တင်သူ “ကိုသခင် သူရိန်” ရေ – ချိတ်အချိုး နဲ့။
ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး လန့်တွားလို့ ပါ။ :D
ကျနော်က သိပ်ပြီးကွန်မန့်ပေးလေ့ မရှိသေးပေမယ့် ဝင်ပြောကြည့်အုံးမယ်။ ဆိုင်မဆိုင်တော့ သိပ်မသေချာဘူး။ ကျည်းကန်ရှင်ကြီး ဆုံးမစာ ရှိတယ်ဗျ။ မြွှေပွေးငယ်တယ်ဆိုပြီး အလမ္ပာယ်မပြနဲ့။ သူဌေးကြွှယ်သော်လည်း မာန်စွယ်မထနဲ့တဲ့။ “မြွှေပွေးငယ်တယ်ထင်ပြီး အလမ္ပာယ်ပြက ထိုမြွှေခဲလို့ ဆုံးတတ်သည်တဲ့”။ “သူဌေးကြွှယ်တယ်ဆိုပြီး မာန်စွယ်ထက ထိုပြည်ထဲက မုန်းတတ်သည်” တဲ့ဗျ။
အမှန်က “ဂဇက်ရွာကြီးအား သိမ်းရန် တာဆူ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ကျွန်မ မဆီမဆိုင် အာချောင်လိုက်မိတာပါ။
တကယ်တော့ ဒီလို အရေမရ အဖတ်မရ မှတ်ချက်မျိုးကို ဒီလို Post မျိုးမှာ မပေးသင့်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မ က လဲ အူကြောင်ကြောင် ပေါတောတော မို့ပါ။
နောင် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အတွက် မို့ ဒီလို သတိပေးတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-)
မဟုတ်ပါဘူး ။ မဟုတ်ပါဘူး။ မခင်လတ်ကို သတိပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကလဲ မဆီမဆိုင် ဝင်ပြီး အာချောင်ကြည့်တာပါ။ ကျနော်ကလဲ အူကြောင်ကြောင်ပါဗျ။ ဒါပေမယ့် ဒီကျည်းကန်ရှင်ကြီး ဆုံးမစာလေးစာကို ပြောချင်စိတ် ရှိလာလို့ ဝင်ပြောမိခြင်းပါ။ မခင်လတ်ကလဲ အူကြောင်ကြောင် မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာ မခင်လတ်က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာတတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်မနှိမ့်ချပါနဲ့ဗျ။ မခင်လတ်ရေ နောက်တာပါနော်။ တကယ်ပြောတာပါ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။
သူတို့ကို.. ယူအက်စ်မှာ.. ဂျော်ဂျီယာဖက်မှာ ပြောင်းခိုသူတွေအဖြစ် နေရာချထားပေးတယ်..
မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကမှ.. သူများအိမ်ကကြောင် စားဖို့ဖမ်းလို့ ရဲမိတော့.. ဂွတ်..ဂွတ်ဗဲဒီးဂွတ်လုပ်ပြတာနဲ့..
ကဲရှုပ်တယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ US လိုသဘောထားပြီး poll ကောက်ကြည့်ရအောင်ဗျား။ကျုပ်အရင်မန်ဘာမဝင်ခင်တုန်းကရှိခဲ့ဖူးတယ်ထင်ပါရဲ့ ။အဲဒီစနစ်ကို ခင်ဗျားလုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကြီးကအနိုင်ကျင့်
မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးလိုက်ကြည့် တစ်စုနဲ့တစ်စု ရုပ်ရည်အနေအားဖြင့်
အများကြီးကွာတာမရှိပါဘူး၊ သူတို့(ရိုဟင်ဂျာ)နေထိုင်တဲ့နေရာက ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပဲကြည့်ပါ
သူတို့ရုပ်တွေနဲ့တစ်ခြားစီပါပဲ၊ ရှမ်းတွေဆိုလျင် စကားသံရုပ်ရည် တရုတ်တွေနဲ့ နဲနဲပါးပါးဆင်သလိုရှိပါတယ်၊
သူတို့ကတော့ဗျာ နံ့သာဆီ နဲ့ အီး၊ မိုး နဲ့ မြေကြီးပါ။
အကို အာရကန် သူရိန်သခင်ကြီးရေ
မောင်ရင် သရိန်း ခို…
၀င်းတော်ကာ ကဗျာ ကြိုက်တယ်ဗျို့
အဲဒီ လူမျိုးနာမည်ကို အခု ပြောတော့ မှ ကြားဘူးတာပါ အိမ်နားမှာ အသက်ကြီး ၀ါကြီး တဲ့ လူကြီး မိဘများကို
လဲ လိုက်မေးကြည့်တော့ မရှိပါဘူးဆိုပါတယ် ။ နေစရာ မရှိတာတော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါဒင်းတို့ သက်သက်
မြန်မာနိုင်ငံ ကို လူမျိုးဝါးမျို ပြီး သိမ်းချင်တာ ။ရွာထဲ ၀င်လာပြီး ဟိုဟာလားဒီဟာလား လာလုပ်ကြည့်ပါလား
အရေခွံ နွှာ ပစ်မမယ်
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိဘူး… အဲးဒါ ဘင်္ဂါလီ ကုလား တွေ.. ရိုဟင်ဂျာနာမည်တတ်ပြီ နယ်မြေလာလုနေတာ..
စိတ်မကြီးပါနဲ့ ကိုမဟူရာ မဲမဲမှောင်ရယ်…..။ ရိုဟင်ဂျာကို ကဖုန်းကျော်ပို့စ်မှာ တွေ့ပြီးမဟုတ်လား….။ ကဖုန်းကျော်ကတောင် ပြောသေး…၊ မြန်မာပြည်မှာ လူဦးရေနည်းလို့ လူတိုင်းချမ်းသာပြီး စားမလောက်တော့လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခေါ်ပြီး လူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်နေရာချထားပေးမယ်ဆိုပြီး…။ သူကတော့ အော်ဇီကြီးကနေ အော်နေတာ…။
Rohinjar is not Myanmar national. Muslims are more and more in Myanmar.
I heard, Mawlamyaing has become half of Muslim population. If it is so, After 30 years,
Muslim population will become about half of our country.
ဒါဆိုရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို အမေရိကား ပို့ လိုက်ကြဗျာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ မြန်မာတွေ အစားပေါ့။
ကိုစံလှကြီး – ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ။ :-)
ကျွန်မ ပေါတောတော ဟုတ်မဟုတ် ကျွန်မ အခုတင်ထား တဲ့ Post အသစ် ကို ကြည့်လိုက်။
ကျနော်က တကယ်နောက်နေတာပါ။ အမယ်လေးဗျာ ဒုက္ခပါပဲ။ ရှိကြီးခိုးပါရဲ့။
ကဲ လာ – လက်ချင်းရိုက်စို့။ high five :D
နောက်တယ်ဆိုလို့ တော်ပါသေးရဲ့။ ကျနော်က မိန်းကလေးတွေကိုတော့ နည်းနည်းကြောက်တယ်ဗျ။ အမှန်က လေးစားတာပါ။ အမှန်တော့ မခင်လတ် နဲ့ ကျနော်နဲ့ ဘာအဖုအထစ်မှ မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ကျေပြီလို့တောင် ပြောစရာမရှိပါဘူး။(ဒီလို တကယ်ကို ယုံကြည်တာပါ။)
လက်ချင်း ရိုက်ချင်သပဆိုလဲ သဘောတော်မြတ် အတိုင်းပါပဲဗျာ။ ဂိုဏ်းတူမောင်နှမ တွေပဲဟာ။ ဝူတန်းဂိုဏ်းက အဲ နောက်တာပါ အမရေ။
ကျွန်မ က မိန်းကလေး မဟုတ်တော့ ပါဘူး။
မိန်းမကြီး ဖြစ်နေတော့ မကြောက်ပါနဲ့လေ။းD
ဝူတန်း ဂိုဏ်း ဆိုလဲ ဝူတန်းကြတာပေါ့။
ဒီရွာထဲ မှာ အော်မေ့ ဂိုဏ်းတဲ့။ နူးဘာဂိုဏ်း တဲ့။
အခု ဂိုဏ်း အသစ် ဝူတန်း ဂိုဏ်း ပေါ့။
ဘယ်သူတွေ ဂိုဏ်းဝင် ကြမလဲ။ ကံစမ်းမဲ ဖောက်မည်။
Post ထဲ ဝင်ပြီး ဂိုဏ်းဖွဲ့ နေတာ ကိုသူရိန် စိတ်မရှိပါနဲ့။ :-)
ဟေ့နောက်ထပ် လူမျိုးစုတွေတော့ ရွာထဲ ဝင်မလာပါနဲ့ဗျာ….
ကြောက်လို့ပါ… အခုတောင် ရိုဟင်ဂျာဂိုဏ်းကို မနည်းရှင်းနေရပြီ…
ကျွန်တော်လည်း ဝင်နောက်သွားပါသည်… ခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်…
ကျွန်တော် မသိ၍ အမေကို မေးကြည့်ဖူးပါသည်……….
အမေက မဆိုင်းမတွ ဖြေခဲ့ပါသည်…………..
“ဟဲ့….သိတာပေါ့ သားရယ်၊ သားတို့ငယ်ငယ်က
အိမ်နောက်ဖေးမှာ တစ်မတ်ပေးရင် ချိးကျုံးပေးတဲ့ ကုလားလေ..”